Voina tetsy Ankorondrano Andrefana :: Zazavavikely matin'ny kamiao teny an-dalana ho any am-pianarana • AoRaha
Voina tetsy Ankorondrano Andrefana Zazavavikely matin’ny kamiao teny an-dalana ho any am-pianarana
Nandriaka ny ra, tetsy amin’ny arabe amin’ny «Boulevard de l’Europe» Ankorondrano Andrefana, izay mampitohy an’Anko­rondrano sy Ankazomanga, omaly maraina. Niharan’ny lozam-pifamoivoizana teo ny zazavavikely iray, valo taona.
Voadonan’ny kamiao izy teny an-dalana handeha hianatra. Mbola teny am-ba­beny ny kitapony tamin’izy nitsirara teo amin’ny arabe. Nentin’ny polisy natao famotorana avy hatrany ny mpamily nitondra ny fiara nanao loza. Ora vitsivitsy taorian’izay kosa vao nalaina teny an-toerana ny razana.
Vetivety dia nitangorona ny olona tamin’ny fahitana ny loza. Tonga haingana teo ihany koa ny polisy.
«Tany am-piasana aho no nisy niantso fa niharan’ ny lozam-pifamoivoizana ny zanako. Tsy mbola fantatro tamin’izany na maty izy na tsia. Indrisy, vatana mangatsiaka no novantaniko», hoy Randriambolasoa Jean Pierre, rain’ilay zaza namoy ny ainy.
Tsy hita ny zokiny
Samy manana ny fitantarany momba ity loza ity ny fianakaviana mana-manjo sy ny mpandeha tao anaty kamiao. Avy niampita arabe voalohany ka nandeha teo amin’ny fandehanan’ny mpandeha an-tongotra eo afovoan’ny arabe nikasa hiampita ny arabe faharoa ilay zazavavy no tra-doza.
«Niaraka tamin’ny zokiny vavy, 14 taona, handeha hianatra i Eulalie, ilay namoy ny ainy. Tsy hita anefa io zokiny io, taorian’ny loza. Mety ho nandositra noho ny tahotra izy. Tsy maintsy mbola hojerenay ny any am-pianarany», hoy ihany Randriambolasoa Jean Pierre.
Nitondra biriky ny kamiao nahadona azy. Ny mpamily sy lehilahy hafa mpitaona biriky no tao anaty fiara.
«Zavatra nipoaka no henonay avy any afaran’ny fiara. Hay voadona tao ilay zazavavikely. Efa hitanay nijoro irery teo amin’ny fandehanan’ny mpandeha an-tongotra izy ka mety ho saika niampita no voadonan’ny vodin’ny fiara», hoy kosa ny lehilahy iray milaza ho nandeha tao anatin’ny kamiao.
Nikasa hamonjy sekoly eny Anjanahary Randriam­bola Fanomezantsoa Eulalie izao tra-doza tampoka izao. Mipetraka eny Ankorondrano Andrefana, tsy lavitra ny arabe nisehoan’ny loza izy.
Fianjerana moto tetsy Namontana :: Zandary iray namoy ny ainy, iray hafa tsy mahatsiaro tena
Firehetana teny Andohalo :: Afo nandorana fako nahakila fiara iray